Deganaanshaha Finland - InfoFinland
Nolosha Finland > Deganaanshaha > Deganaanshaha Finland
Finland waa mid ka mid ah wadamada dunida ugu ammaanka badan, deegaannada Finland oo dhanna waa kuwa nabad ah oo la degi karo. Guryuhu waa kuwa si fiican loo qalabeeyay sannadka oo dhanna diiran, bey’aduna waa mid magaalooyinka u dhow. Gaadiidka dadweynuhu si wanaagsan ayeey magaalooyinka uga dhex-shaqeeyaan.
Farqiga dakhliga dadku waa mid ka yar kan wadamo kale oo badan ka jira. Tan waxay ka muuqataa xittaa degitaanka: farqiga deegaannada kala duwan u dhexeeyaa ma ahan mid aad u weyn oo lamid ah sida kan ka jira wadamada farqiga weyn ee dakhligu uu ka jiro.
Guri kiro mise guri si gaar ah loo leeyahay?
Finland waxaa ka jira noocyo deegaan oo kala duduwan. Waxaad kireysan kartaa ama iibsan kartaa guri, waxaa kale oo la helaaa waxyaabo kale oo labaadaan u dhexeeya.
Guryaha kirada ah ee Finland
Qiyaastii afar qaybood qayb Finnishka ka mid ah ayaa deggan guri kiro ah. Guryaha la kireysto intooda badan waa kuwa dabaqyo ah, laakiin waxaa la kireysan karaa guryaha gaarka loo leeyahay ama guryaha gaagaaban ee isku sekedda ku yaal. Qiimaha kiradu aad ayuu ugu kala duwan yahay deegaannada. Kuwa ugu qaalisan waxay intooda badan ku yaalaan bartamaha magaalooyinka waaweyn.
Guryaha waxaa kireeya shirkado, shakhsiyaad gaar ah, magaalooyin, mu’asasooyin, kaniisado, ururo, shirkado caymis iyo bangiyo. Shaqo-bixiyayaasha qaarkood waxay shaqaalahooda siiyaan guryaha xiriirka shaqada.
Guryaha la kireysto ee bannaan waxaad ka raadsan kartaa adeegyada wax raadinta ee internetka.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri bogagga InfoFinland Guri kiro iyo Heshiiska kirada.
Guri iibsashada Finland
Qiyaastii saddex qaybood qayb Finnishka ka mid ah ayaa deggan guryo ay iyagu leeyihiin. Marka wakhti dheer laga eego iibsashada guriga ayaa qiimo ahaan ka jaban degitaanka guriga ijaarka ah.
Qiimaha guryaha ee meelo kala duwan ee Finland waa mid aad isu bedbeddasha. Qiimaha waxaa saameyn ku leh meesha uu gurigu ku yaal iyo da’diisa. Guryaha ku yaal magaalooyinka waaweyn waa ka qaalisan yihiin kuwa ku yaal meelaha kale ee Finland. Si kastaba ha ahaatee guriga magaalada weyn ku yaal waa maalgashi ammaan ah: waxaa ay u badan tahay, in qiimaha guryuhu uusan hoos u dhicin. Baadiyaha iyo degmooyinka yaryar guryaha ku yaal waa kuwa aad u jaban, laakiin waxaa laga yaabaa in ay ku adkaato in uu gurigu kuu gadmo, haddii aad dooneyso in aad iska wareejiso.
Guryaha beeca ah waxaad ka raadin kartaa adeegyada wax raadinta ee Internetka.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan guri gadashaa ka akhri bogga InfoFinland Guri iibsasho.
Guriga xuquuqda daganaanshaha la leeyahay waa guri aad marka hore ka bixinayso lacagta xaqa daganaanshaha. Waxaa kale oo bil kasta ka bixinaysaa lacag cayiman oo deganaanshaha ah yacno lacagta isticmaalka. Lacagta xaqa daganaanshuhu waa qiyaas ahaan 15% qiimaha guriga. Cadadda lacagta isticmaalku waxay ku xiran tahay guriga iyo degmada.
Guryaha xuquuqda daganaanshuhu waxay ku yaalaan magaalooyinka waaweyn. Haddii aad doonayso guriga xuquuqda daganaanshaha, ka codso marka hore lambarka faylka xafiiska guryaha ee degmada. Lambarka waxaad ka codsan kartaa degmooyin badan oo kala gedisan.
Haddii aan guriga xaqa daganaanshaha lagu dhisin taageerada dowladda, milkiilaha guriga ayaa dadka degaya guriga dooran kara. Haddii ay dowladdu kaalmaysay dhismaha guriga, dadka degaya waxay leeyihiin waxyaabo lagu kala xulanayo oo kala duduwan, tusaale haan da’da iyo hantida.
Macluumaad la xiriira degenaanshada guryaha xuquuda degenaanshada la leeyahayFinnish | Iswidish | Ingiriis
Guri qayb ahaan la leeyahay waxaa loola jeedaa, in marka hore aad guriga ka gadato qayb kaddibna aad guriga kiro ku degto. Gadaal dambe waxaad wada gadan kartaa guriga.
Marka aad u guurto guri qayb ahaan la leeyahay, waxaad marka hore qiyaas ahaan qiimaha guriga ka bixinaysaa 10-20 %. Tan kaddib waxaad guriga ku deggan tahay kiro. Sida caadiga ah wakhtiga kirado waa qiyaastii 5- 12 sannadood. Isla wakhtigaas waxaad guriga ka iibsan qaybo kale, haddii sidaas kula heshiisay qolo guriga dhisatay.
Wakhtiga kirada kaddib guriga adiga ayaa iibsanaya. Markaas guri caadi ah oo lahaansho ayaad ku leedahay shirkadda guriga.
Kharashka degananaashaha ku baxa ee Finland
Finland, celicelis ahaan kiradu waa 15 yuuro/m². Tani waxay quseysaa heshiisyada kirada ee cusub. Si kastaba ha ahaatee qiimaha guriyaha la kireysto waxay isbedbeddelaan waxayna u dhexeeyaan 10-30 yuuro/m². Kuwa ugu qaalisan waxay ku yaalaan bartamaha magaalooyinka waaweyn. Guryaha halka qol qiimahooda kirada halkii mitir ee labajibbaaran waa ka badan yihiin qiimaha guryaha waaweyn. Inta badan waxaa kirada dheer oo ay tahay in la bixiyo biyaha, korontada, caymiska guriga iyo internetka. Lacagta biyuhu waxay ku xiran tahay inta qofood ee guriga deggan.
Guryaha la leeyahay ee Finland qiimahoodu celcelis ahaan waa 2300 yuuro/ m². Si kastaba ha ahaatee isbeddelku waa mid weyn. Guryaha magaalooyinka waaweyn waa kuwa ka qaalisan meelaha kale. Magaalada dhexdeeda xittaa qiimaha guryuhu waxay aad ugu kala duwan yihiin deegaannada. Qiimaha iibka ka sokow waxaa kharashka degitaanka saameyn ku leh dayactirka lagu sameeyay guriga ama shirkadda guriga.
Ogeysiiska iibka guriga waxaa ku qoran labo qiimo: qiimaha lagu iibinayo iyo qiimaha aysan deyntu ku jirin. Qiimaha guriga ee dhammaystiran waa qiimaha deyn la’aanta ah ee guriga. Qiimaha iibku wuxuu sheegayaa, cadadda lacageed ee guriga lagu gadan karo, laakiin waxaa taas dheer oo isticmaalka shirkadda laga bixinayaa deynta shirkadda guriga, taas oo si weyn kor u kicin karta qiimaha gadashada.
Lacagta shirkadda ee guryaha shirkadaha waxaa inta badan u dhexeeyo farqi weyn oo dhinaca kharashka ah. Lacagta shirkadda guriga waxaa saameyn gaar ah ku leh baaxadda guriga, dayactirka iyo, haddii shirkadda guriga ay leedahay dhulka gurigu ka dhisan yahay.. Marka aad guriga gadaneyso iska hubi in shirkaddu dhulka leeyahay iyo dhulku uu yahay mid kiro ah.
Maadaama Finland uu ytahay dal qabow ah, kululeynta guryaha sida gaarka ah loo leeyahay ayaa ah kharashka ugu badan. Qeybta ku baxda waxay noqon kartaa ku dhowaad kalabar kharashaadka deganaanshaha ku baxa. Kharashaadka kale ee guryaha yaryar ku baxa waa caymiska hantida maguurtada ah, korontada, biyaha, qaadista qashinka iyo dayactirrada laga yaabo in lagu sameeyo.
Sidee ayaa Finland loo degaa?
Magaalooyinka Finnishku waxay leeyihiin xaafado badan oo guryohooda la dhisay 1960kii ama 1970kii. Magaalooyinka waaweyn waxaa ku yaal guryo badan oo cusub. Aqallada guryahaas ku yaal waa kuwa inta badan ka qaalisan kuwa duqda ah.
Qiyaastii kala bar ee dadka Finnishka ah waxay deggan yihiin guri ay leeyihiin ama dhismaha labada guri ee isku dheggan. Guryaha looxaanta ka samaysan ayaa ah kuwa ku badan Finland. Qiyaastii saddex qaybood hal qayb dadka Finnishka ah ayaa deggan guryaha dabaqa ah, laakiin degitaanka guryaha dabaqyada ah ayaa ah mid magaalooyinka ku badan. Celcelis ahaan halkii guriba waxaa deggan labo qofood. Qiyaastii 20% dadka Finnishka ah ayaa ah kuwa kaligood deggan.
Guryaha Finnishka waxaa dhul ahaan ku soo aadaya qiyaastii qofkiiba 40 m², laakiin farqigu waa mid weyn.
Qiyaas ahaan kalabar dadka Finnishka ah ayaa deggan guriga lagu kululeeyo kuleyl meel fog looga keeno. Hababka kale ee caamka ah ee wax lagu kululeeyo waa kul dhuleedka iyo koronto ku diirinta. Heerkulka gudaha ee asalka ah ee Finland ee 21°C. Inta badan daaqadaha guryuhu waa kuwa saddex jibbaaran, taasina waa sababta uu kulku gudaha ugu nagaado.
Aqal kasta ee ku yaal guryaha dabaqa wuxuu leeyahay qol yar oo wax lagu keydsado, kaas oo ku yaal bakhaarka dhulka hoose ku jira ama bakhaarka kore. Shirkadaha guryaha qaarkood waxay leeyihiin qolka dharka lagu dhaqdo, kaasoo ay dadka guriga deggan ay dharkooda ku dhaqan karaan, marka ay lacag bixiyaan.
Guryaha isku sekedda ku yaal iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay ee Finnishku waxay inta badan leeyihiin sawna u gaar ah. Guryaha dabaqyada ah ee cusub xittaa waxay intooda badan leeyihiin sawna u gaar ah. Sawna guryaha dabaqyada ah ee duqda ah waxay inta badan ku taalaa meelaha dadka ka dhexeeya ee shirkadda guriga, wakhtina waad ka qabsan kartaa, haddii aad bixiso lacagta bisha.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan deganaanshaha gudaha Finalnd
Waxyaabaha ay tahay in aad wax ka qabashadooda xusuusato, marka aad guri cusub u guurto? Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri bogga InfoFinland Markii aad guuraysid.
Sidee ayaad uga hortagi kartaa dabka iyo waxyeellada biyaha? Waa maxay shaqooyinka korontada ee qofku iskiis ugu sameyn karo Finland? Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri bogga Nabadgelyada guriga.
Waa maxay xuquuqaadka iyo waajibaadka aad leedahay kuna saaran, marka aad Finland ka deggan tahay guri kiro ah ama guri aad leedahay? Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri bogga Xuquuqda iyo waajibaadka deganaha.
Sidee ayaa Finland qashinka loo kala soocaa? Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri bogga Xuquuqda iyo waajibaadka deganaha.
Xaaladdee ayaa Kelada uga heli kartaa kaalmada ijaarka? Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri bogga Qashinka iyo dib u isticmaalidda.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 21.01.2022 Boggan war-celin ka soo dir